Nieritreritra Aho hoe Efa Tafita | Madona Kankia
TANTARANY Mpikambana tao amin’ny Antoko Kominista géorgien izy. Olona maro no nampiany hahalala ny fahamarinana. Nahazo diplaoma tamin’ny Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana voalohany teto Tbilissi izy, tamin’ny 2015.
NANDRE voalohany ny fahamarinana aho tamin’ny 1989. Nitana toerana ambony tao amin’ny Antoko Kominista tao Senaki, tanàna nisy anay aho, tamin’izany. Nivory tsy tapaka niaraka tamin’ny parlemanta sovietika teto Géorgie koa aho. Ankoatra izay, dia efa nanana fofombady aho. Nieritreritra àry aho hoe efa tafita.
Nampianarin’i Dada sy Neny ho tia an’Andriamanitra aho, ka nino hoe misy izy na dia Kominista aza aho. Voavaly daholo ireo fanontaniana nanitikitika ny saiko, rehefa nanomboka nianatra Baiboly aho. Tapa-kevitra àry aho fa hanokan-tena ho an’i Jehovah. Tsy nanaiky an’izany anefa ny fianakaviako, ny namako, ny mpiara-miasa tamiko, ary ilay fofombadiko.
Lasa tsy tia ahy intsony ny havako, noho ilay fivavahako vaovao. Tsy nety tamiko intsony koa ny nanao politika. Hitako hoe tsy maintsy niala tao an-trano aho, nisaraka tamin’ilay fofombadiko, niala tamin’ny asako, ary niala tsy ho mpikambana tao amin’ilay Antoko Kominista sy ny parlemanta. Vao mainka nanenjika ahy ireo tapaka sy namana rehefa vita batisa aho. Niteraka savorovoro be tao an-tanàna ilay izaho lasa Vavolombelon’i Jehovah, ka naleoko nifindra tany Koutaïssi. Tonga aho dia nanao mpisava lalana.
Misy manontany ahy hoe tsy nampaninona ahy ve ny niaritra an’ireny zava-tsarotra ireny noho ny finoako. Tsy misalasala aho mamaly hoe tsy nanenenako mihitsy ny fanapahan-kevitro. Marina fa tsy azon’i Dada sy Neny ny safidy nataoko, nefa faly aho fa nampianarin’izy ireo ho tia an’Andriamanitra sy ny mpiara-belona. Nisy vokany be tamiko izany.